Agricultural Machinery, Ikpokọta ubi, Ọka Ikpokọta ubi - Zhonglian
NEW ỌRỤ ubi ngwá maka gị niile mkpa
Ọka ikpokọta ubi
Peanut ikpokọta ubi
Wheat / osikapa ikpokọta ubi
Zhengzhou Zhonglian Harvest Machinery Co., Ltd bụ a ọkachamara ikpokọta ubi n'ichepụta ụlọ ọrụ nke integrates ngwaahịa nnyocha, akụkụ ahụ mapụtara amị, zuru igwe Nzuko na ngwaahịa mgbe-ire ọrụ. The ụlọ ọrụ e hiwere na 1995 na dị n'etiti Zhiji Road nke Xingyang obodo, Henan Province. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi banyere 150,000 square mita, na nwere ihe karịrị 500 ọrụ gụnyere 56 engineering technical oru na 67 ọkà technicians. Mkpokọta akụ esịmde Anyị $ 60 ọtụtụ nde nke nwere na-arụ ọrụ ego nke US $ 25 nde. The ụlọọrụ n'aka ratting nke nwetara 2A + na Industrial na Commercial Bank.
Na technology ka isi, na ịzụlite ma na-emepụta elu-edu ngwaahịa dị ka iche iche mkpa nke ndị ahịa.